စိုးညွန့် (စာရေးဆရာ) - ဝီကီပီးဒီးယား
(1932-04-18)၁၈ ဧပြီ၊ ၁၉၃၂
၂ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၀၉(2009-10-02) (အသက် ၇၇)
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာနိုင်ငံ
ဦးစိုးညွန့် (ကလောင်အမည် ထီလာ စစ်သူ)သည် မြန်မာနိုင်ငံသား စာရေးဆရာနှင့် ကဗျာဆရာတစ်ဦး ဖြစ်သည်။
၃.၁ ရေးသားခဲ့သော စာအုပ်များ
၃.၃ မြန်မာ စာပေ ကျမ်းများ
၃.၄ အခြား ကလောင် အမည်ခွဲများနှင့် ရေးသားသော ကျမ်းများ
၃.၅ အခြားဘာသာတို့ဖြင့် ထုတ်ဝေသော စာအုပ်များ
ရန်ကုန် သက်ကြီး တက္ကသိုလ်တွင် ဥပစာ ဝိဇ္ဇာ (က) အထိ ပညာ သင်ကြား ခဲ့သည်။ မိတ္ထီလာမြို့ အမျိုးသား အထက်တန်းကျောင်း ကျောင်းသား ဘဝ ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် ကျောင်းသား ရဲခေါင် တပ်ဖွဲ့တွင် ပါဝင်၍ သောင်းကျန်း သူများအား လက်နက်စွဲကိုင် တိုက်ခိုက် ခဲ့သည်။ ၁၉၅ဝ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာ လတွင် မြန်မာ့ တပ်မတော်သို့ ဝင်ရောက် ခဲ့သည်။ ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် ပြန်တမ်းဝင် အရာရှိ အဆင့်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး အဆင့်ဖြင့် တပ်မတော်မှ အငြိမ်းစား ယူခဲ့သည်။ ဇနီး ဒေါ်လှယဉ်ယဉ်စိုးနှင့် ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် လက်ထပ်ခဲ့ပြီး သားသမီး ၈ ဦး ထွန်းကား ခဲ့သည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် အမျိုးသား စာပေ ညီလာခံကြီးကို ဦးဆောင် ကျင်းပ ပေးခဲ့သည်။ အလားတူ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ မေလတွင် ဝါဂီနစ် (သဘင်) ပညာသည်များ ညီလာခံ ကိုလည်း ကျင်းပ ပေးခဲ့သည်။
ဦးစိုးညွန့်သည် ဝန်ထမ်းသက် ကာလ တလျှောက်တွင် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီး ဌာန၊ ပြည်ထဲရေးနှင့် သာသနာရေး ဝန်ကြီး ဌာန၊ လယ်ယာနှင့် သစ်တော ဝန်ကြီး ဌာန၊ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာနနှင့် ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး ဌာန တို့တွင် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ၁၉၈၄ - ၈၈ ခုနှစ်၊ မဆလ ပြည်သူ့ လွတ်တော် သက်တမ်းတွင် မကွေးတိုင်း မြို့သစ် မဲဆန္ဒ နယ်မြေမှ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင် ခဲ့သည်။ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး ဌာနနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီး ဌာန နှစ်ခုတွင် သုံးကြိမ်စီ ဌာန အကြီးအကဲ အဆင့်မှ ဒုတိယ ဝန်ကြီး အဆင့်အထိ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
ဦးစိုးညွန့်သည် မြန်မာနိုင်ငံ စာပေနှင့် စာနေယ်ဇင်း ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၃ ခုနှစ် အထိ ဆောင်ရွက် ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျင်းပ ခဲ့သော ပထမ အကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံ စာပေ ညီလာခံကြီး အောင်မြင်စွာ ကျင်းပ နိုင်ရေးကို ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်က ချီးမြှင့်သော စစ်မှုထမ်းကောင်း တံဆိပ် အပါအဝင် ၅ ခု၊ ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်း တံဆိပ် ၄ ခု၊ စုစုပေါင်း ဘွဲ့ထူး ဂုဏ်ထူး ဆိုင်ရာ ဆုတံဆိပ် ၉ ခု ရရှိခဲ့သည်။ စစ်မှုထမ်းကောင်း တံဆိပ် (Marshal Tito's Military MeritThird Degree) များ ပါဝင်သည်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဘွဲ့ပေးအပ်ခဲ့သည်
ဦးစိုးညွန့်သည် ငယ်စဉ်ကပင် ကဗျာကို ၁၄ နှစ်သား အရွယ်က စ၍ ရေးသား ခဲ့ပြီး ယခု အခါ ကဗျာအပုဒ်ရေ ၁,ဝဝဝ ကျော် ရေးသား ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဆောင်းပါး၊ စာတမ်း၊ ဝတ္ထုတို စုစုပေါင်း အပုဒ်ရေ ၁,၅ဝဝ ကျော် ရေးသားခဲ့ရာ ၂၅၅ ပုဒ်မှာ အင်္ဂလိပ် ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ စာအုပ် အဖြစ် ကဗျာ စာအုပ် ၁၄ အုပ်နှင့် ဝတ္ထု စာအုပ် ၁၁ အုပ် ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေ ခဲ့သည်။ ၎င်းစာအုပ် များမှာ မြန်မာ - အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာဖြင့် ပြန်လည် ရိုက်နှိပ် ထုတ်ဝေရန် စီစဉ်လျက် ရှိသည်။ ဆရာ၏ ထင်ရှား ကျော်ကြားသော ကဗျာ အများအပြားကို အင်္ဂလိပ် - တရုတ် - ပြင်သစ် - ဂျပန် ဘာသာတို့ဖြင့် ပြန်ဆို ထားပြီး ဖြစ်သည်။
ထီလာစစ်သူသည် ထင်ရှား ကျော်ကြား လှသော မဲခေါင်မြစ်မှ အိုရွက်ဝါ ကဗျာ စာအုပ်သည် ၁၉၆၂ ခုနှစ်က မြန်မာ နိုင်ငံတွင် အစောဆုံး စာပေဆု ဖြစ်သော စာပေဗိမာန်စာမူဆုကို ချီးမြှင့်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ထိုစာပေဗိမာန် ဆုရ မဲခေါင်မြစ်မှ အိုရွက်ဝါ ကဗျာ စာအုပ်ကို နယ်သာလန် နိုင်ငံ စတီဖင် စာအုပ်တိုက်မှ အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် ရိုက်နှိပ် ရောင်းချ ခဲ့သည်။ ဘာသာ ပြန်ဆိုမှာ အရှင် အာနန္ဒာ ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ထီလာစစ်သူ၏ ၂ဝ ရာစုနှစ် မြန်မာ စာဆိုနှင့် မြန်မာ ကဗျာ (ဂုဏ်ဝင်း) စာအုပ်သည် ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသား စာပေဆု ချီးမြှင့်ခြင်း ခံရသည်။
ထီလာစစ်သူ၏ စာများ အနက် စီးဆင်းရစ်လေဦး ဧရာဝတီ စာအုပ်နှင့် ၂ဝ ရာစု မြန်မာ စာပေနှင့် မြန်မာ ကဗျာများ( ငွေတာရီ၊နုယဉ်၊ မင်းယုဝေ၊ဘုတလင် ချစ်လေး၊ ဂုဏ်ဝင်း၊နောင်) စာအုပ်နှင့် လောကအမြင် စာအုပ် သည်လည်း စာပေ သမိုင်း မှတ်တိုင်များ အဖြစ် ထင်ရှား ကျန်ရစ်လျက် ရှိသည်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ Indochina Venturn Forum အသင်းကြီးက ကမ္ဘာ့ စာပေ လောကတွင် ထင်ရှားသော မဲခေါင်မြစ်မှ အိုရွက်ဝါ ကဗျာ စာအုပ် အတွက် (The great Poet Laureate) ကဗျာ သရဖူဘွဲ့ကို ချီးမြှင့် ပေးခဲ့သည်။ ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ (Min-on) အနုပညာ ကဇာတ် အဖွဲ့မှ ဂုဏ်ထူးဆောင် အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ခန့်အပ် ချီးမြှင့်ခြင်း ခံရသည်။
နအဖ စစ်အစိုးရက ထီလာစစ်သူနှင့် အခြားသတင်းစာ ဆရာ ၅ ဦးတို့အား သတင်းစာအသီးသီး၌ ရေးသားခဲ့သည့် ၎င်းတို့၏ စစ်အစိုးရဝါဒဖြန့် ဆောင်းပါးများအတွက် ၁၉၉၇ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၉ရက်တွင် သီးသန့် ဂုဏ်ပြုချီးကျူးပွဲ အခမ်းအနားတစ်ရပ် ကျင်းပ၍ ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဘွဲ့ကိုလည်းပေးအပ်ခဲ့သည်။
ထီလာစစ်သူသည် ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် ဆွစ်ဇာလန်နှင့် ယူဂိုဆလားဗီးယား နိုင်ငံများသို့ လည်းကောင်း၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန်၊ ဂျပန်နှင့် ဟောင်ကောင် နိုင်ငံများသို့ လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၇၊ ၁၉၉ဝ၊ ၁၉၉၁၊ ၁၉၉၂၊ ၁၉၉၈ ခုနှစ် တို့တွင် တရုတ် နိုင်ငံသို့ လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၁ တွင် ဂျပန် နိုင်ငံသို့ လည်းကောင်း သွားရောက် ခဲ့သည်။
ကျွန်တော်က သူ့ကို မမေ့ပါနှင့် အခြား ဝတ္ထုလတ်၊ ဝတ္ထုတို ပေါင်းချုပ် - ၁၉၉၉ ခုနှစ်
ချစ်ကြသူတို့ အကြောင်း (ဝတ္ထု) - ၁၉၈၁ ခုနှစ်
ချစ်ကြသည် ဆိုရာဝယ် (ဝတ္ထု) - ၁၉၆ဝ ပြည့်နှစ်
ချစ်သူနှင့်သာ ဆိုလျှင် (ဝတ္ထု) - ၁၉၆၄ ခုနှစ်
ချစ်သော နစ်ကင်စီမှ မီနှင့် အခြား ဝတ္ထုတိုလတ်၊ ဝတ္ထုတို ပေါင်းချုပ် - ၁၉၉၇ ခုနှစ်
စီးဆင်းရစ်လေဦး ဧရာဝတီ (ဝတ္ထုကြီး)၊ (ပထမတွဲ) - ၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ်
စီးဆင်းရစ်လေဦး ဧရာဝတီ (ဝတ္ထုကြီး)၊ (ပ+ဒု+တ အတွဲများ) - ၁၉၇၇ ခုနှစ်
နှလုံးသားမှ မေတ္တာရေစင် (ဝတ္ထု) - ၁၉၈၃ ခုနှစ်
မောင့်ရင်ထဲမှာ လဝန်းသာစေချင် (ဝတ္ထု) - ၁၉၉၃ ခုနှစ်
မြပုလဲသွယ် (ဝတ္ထု) - ၁၉၆၅ ခုနှစ်
လွမ်းငွေ့ ယမ်းငွေ့ နှင်းငွေ့မှုန်မှုန် (ဝတ္ထု) - ၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ်
ကြာပန်းဝတ်ရည် ကဗျာများ - ၁၉၉၂ ခုနှစ်
ကြယ်ပွင့်တထောင် ပန်းတထောင် ကဗျာများ - ၁၉၇၆ ခုနှစ်
ထီလာစစ်သူ၏ ကဗျာ ပေါင်းချုပ် (ပထမတွဲ) - ၂ဝဝ၁ ခုနှစ်
ပိတောက် တရုတ် စကားဝါ ပန်းရနံ့ဖြာ ကဗျာများ - ၂ဝဝ၂ ခုနှစ်
ဘဝ ပဲ့တင်သံနှင့် ရနံ့ ကဗျာများ - ၁၉၆၅ ခုနှစ်
မဲခေါင်မြစ်မှ အိုရွက်ဝါနှင့် အခြား ကဗျာများ - ၁၉၆၁ ခုနှစ်
ရွက်ဝါမှသည် နေဝန်းနီ ကဗျာ ပေါင်းချုပ် - ၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ်
လက်တောထဲက စာခြောက်ရုပ်ကလေး - ၁၉၈၇ ခုနှစ်
သင်သည် လောက သူရဲကောင်းနှင့် အခြား ကဗျာများ - ၁၉၉၆ ခုနှစ်
သွေးနှင့် လင်္ကာ ကဗျာများ - ၁၉၆၂ ခုနှစ်
ဟိုင်းကြီးကျွန်းနိုင်နှင့် ပန်းဝါနိုင် မော်ကွန်း ကဗျာစု (အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ နှစ်ဘာသာ) - ၁၉၉၉ ခုနှစ်
အနုပညာ ပန်းခင်း ကဗျာများ - ၁၉၉၅ ခုနှစ်
အမိမြေ အမိနိုင်ငံ ကဗျာများ - ၁၉၈၅ ခုနှစ်
အတွေ့အကြုံနှင့် အတွေးအမြင် ကဗျာများ - ၁၉၆၅ ခုနှစ်
အောင်ပွဲနှင့် မျက်ရည် ကဗျာရှည် - ၁၉၆၄ ခုနှစ်
ဧရာဝတီ တေးသံ ကဗျာများ - ၁၉၉၃ ခုနှစ်
ဧရာဝတီပေါ်မှ နေဝန်းနီ ကဗျာများ - ၁၉၆၈ ခုနှစ်
ဧရာဝတီ ယန်စီ ချစ်ကြည် တေးဆို ကဗျာများ - ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်
မြန်မာ စာပေ ကျမ်းများ[ပြင်ဆင်ရန်]
စာပေသမိုင်း ယဉ်ကျေးမှု စာစု အထွေထွေ - ၁၉၉၇ ခုနှစ်
ဆရာကြီး ဇေယျ၏ ကဗျာ စာတမ်း
ဆရာကြီး ဇော်ဂျီ၏ ကဗျာ စာတမ်း
ဆုရ မြန်မာ ဝတ္ထုတိုများ မိတ်ဆက် (ဟိန်း)
ဇာတိမာန် ကဗျာ စာတမ်း - ၁၉၉၈ ခုနှစ်
၂ဝ ရာစု မြန်မာ စာဆို၊ မြန်မာ ကဗျာ (ဂုဏ်ဝင်း) - ၁၉၉၂ ခုနှစ်
၂ဝ ရာစု မြန်မာ စာဆို၊ မြန်မာ ကဗျာ စာပေ (ငွေတာရီ၊ နုယဉ်၊ မင်းယုဝေ၊ ဘုတလင် ချစ်လေး) - ၁၉၈၄ ခုနှစ်
၂ဝ ရာစု မြန်မာ စာဆို၊ မြန်မာ ကဗျာ (နောင်) - ၁၉၉၂ ခုနှစ်
မြန်မာ ကဗျာ ဝေဖန်ရေး စာပေ - ၁၉၉၈ ခုနှစ်
မြန်မာ ဂန္ဒဝင် စာတမ်း - ၁၉၉၈ ခုနှစ်
အခြား ကလောင် အမည်ခွဲများနှင့် ရေးသားသော ကျမ်းများ[ပြင်ဆင်ရန်]
ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို နိုင်ငံရေးနည်းနှင့် ဖြေရှင်းကြသည် ဆိုရာဝယ် (ရဲခေါင် ကျော်စွာ)
မိုးလုံးပြည့် မုသာဝါဒီ ဘီဘီစီ၊ ဗွီအိုအေ၊ အေအိုအာ (သောတရှင် တစ်ဦး) အတွဲပေါင်း (၂) တွဲ၊ အုပ် (၂၈) အုပ် (စိုးညွန့်၊ တင်ထွေး၊ မောင်ရဲတင့် သုံးဦး ပေါင်း၍ ရေးသည်)
မြန်မာနိုင်ငံ စတာလင် နယ်ပယ်မှ ဘာကြောင့် ခွဲထွက်ခဲ့သလဲ (ကလောင် အမည်ခွဲ ဗိုလ်သံမဏိဖြင့် ရေးသည်)
မြန်မာ လူမျိုးတို့ အပေါ် နယ်ချဲ့နှင့် ဖက်ဆစ်တို့၏ ကြမ်းတမ်း ရက်စက် ယုတ်မာမှု များနှင့် အဓမ္မ ယူဆောင်သွားမှု ဖြစ်ရပ်များ (ကလောင် အမည်ခွဲ ဗိုလ်သံမဏိဖြင့် ရေးသည်)
မြန်မာ သမိုင်းကြောင်းကို ပြန်ပြောင်း လေ့လာသော် (သုတေသီ တစ်ဦး)
ဦးနု ပြည်ပြေး ဘဝက ဘာတွေ လုပ်ခဲ့သလဲ (ကလောင်ခွဲ ဗိုလ်သံမဏိဖြင့် ရေးသည်)
အခြားဘာသာတို့ဖြင့် ထုတ်ဝေသော စာအုပ်များ[ပြင်ဆင်ရန်]
မဲခေါင်မြစ်မှ အိုရွက်ဝါနှင့် အခြား ကဗျာများ - ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ် (အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ နှစ်ဘာသာ ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေခြင်း)
A Little Scarecrow in the Paddy Field (German Version) - ၂ဝဝ၁ ခုနှစ်
A Little Scarecrow in the Paddy Field (Myanmar and English Version) - ၁၉၈၈
Ayeyarwady and Yansi-Song the Friendship Sing(Chinese Version) - ၂ဝဝ၁ ခုနှစ်
Critique on Myanmar Poetry An appreciation (English - Myanmar) - ၂ဝဝ၁ ခုနှစ်
I shall never forget him (Novelets and Short Stories). (Myanmar and English Version) - ၁၉၉၉ ခုနှစ်
Keep on flowing Ayeyarwady (Novel) Putra University Press, Malaysia (English Version)
Myanmar Classical Poetry (Myanmar and English Version) - ၁၉၉၈ ခုနှစ်
My beloved Mee From Nickinci of Yugoslavia (Novelets and Short Stories) - ၁၉၉၇ ခုနှစ်
My Precious Pearl Novel (Inwa Publishing Hous Yangon) (Myanmar and English Version) - ၂ဝဝ၁ ခုနှစ်
The Epic Poems of the Conquering of Haing Gyi Island and Pannwa (Myanmar and English Version) - ၁၉၉၉ ခုနှစ်
The Nactar of Lotus (Myanmar and English Version) - ၁၉၉၇ ခုနှစ်
The Song of Ayeyarwady Myanmar Poems Le Chant D Ayeyarwady Poems (Myanmar/English and French Version) - ၁၉၉၅ ခုနှစ်
Withered Leaf from River Mekong and Other poems (Steven Books) - ၁၉၉၃ ခုနှစ်
Withered Leaf from River Mekong and other poems (In Japanese Version) - ၁၉၉၆ ခုနှစ်
↑ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေး ဦးစီး ဌာန (ရုံးချုပ်) စာတည်း အဖွဲ့ (ဧပြီ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်)။ နှစ်ဆယ် ရာစု မြန်မာ စာရေး ဆရာ များနှင့် စာစု စာရင်း (ပထမ အကြိမ် ed.)။ ပညာရွှေတောင် စာအုပ်တိုက်။ |date= ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စိုးညွန့်_(စာရေးဆရာ)&oldid=713748" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။